Ichi chipo chinobva kuCristiano Ronaldo kusvika kuPalestine kwaRamadan - TELES RELAY
HOME » SPORTS Ichi chipo chinobva kuCristiano Ronaldo kuenda kuPalestine kwaRamadan
Ichi chipo chinobva kuCristiano Ronaldo kusvika kuPalestine kwaRamadan
Carin Gouany 17 May 2019
The Portuguese Nyeredzi Cristiano Ronaldo akaita kumamwe mamiriyoni 1,5 kune Palestinian vanhu pachiitiko Ramadan, mwedzi nokutsanya kuti vaMuslim, maererano Onwadan kuti Charity Foundation.
Cristiano Ronaldo, ChiPutukezi mhirizhonga uye nyeredzi nyeredzi ye Juventus yeTurin, yakapa 1,5 mamiriyoni emadhora kuvanhu vePalestina munguva ino Ramadan, mwedzi wokutsanya pakati pevaMuslim, vakataura nezveWorld's Charity Foundation.
Ichi chiito che yokubatana kune vePalestine inotarisirwa kune vagari vemu Gaza Strip avo vari kutarisana nea blockade yakagadzirirwa Israel.
Iyi haisi mutsva wekutanga weGold Ball yakawanda kune iyo Palestina chikonzero.
Muna November 2012, ukuwo Gaza Strip Israeli kubhomba akapukuta pasi Shongwe Defence kushanda (kuzvidzivirira Shongwe, muna French), kuti footballer akanga auctioned ake Golden Boot nokuda yakanakisisa European scorer mwaka kurera mari, mari yakanga zvino hwakatamisirwa Palestinian vakawanda, kunyanya vana.
Article Source: https://fr.sputniknews.com/international/201905171041145580-cristiano-ronaldo-fait-un-don-de-15-million-de-dollars-a-la-palestine-pour-le- Ramadan / utm_source = https: //www.facebook.com/&utm_medium=short_url&utm_content=m2q5&utm_campaign=URL_shortening
Haisi kufara kwaTuchel - The Daily #467 - VIDEO
Neymar, Neres muBrazil kuCopa America, Lucas asipo